मृतकको शव अझै उठेन ! « Tulsipur Khabar
मृतकको शव अझै उठेन !
तुलसीपुर, २५ कात्तिक । पश्चिम दाङको बगरपुरमा ज्यान गुमाएका मृतकको शव अहिले सम्म पनि आफन्तीले उठाउन मानेका छैनन् । शनिवार साँझ साढे ५ वजेतिर बसको ठक्करबाट ज्यान गुमाएका बबई गाउपालिका वडा नम्वर ५ बस्ने २२ बर्षीय मानसिंङ वलीको शव अहिले सम्म पनि उठाईएको छैन ।
राप्ती यातायात प्रालीद्धारा सन्चालित उक्त बस धनी र प्राली सन्चालक समितिका अध्यक्ष संग छलफल गरी दोषीलाई कारवाहि र पिडितलाई उचित क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने माग गदै शव उठाउन नमानेको ईलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरले जानकारी दिएको छ ।अहिले त्यहा तनाव उत्पन्न भएको प्रहरीले बताएको छ ।
दंगीशरण गाउँपालिका वडा नम्वर ६ बाट पिकनिक खान गएर फर्कीने क्रममा ना २ ख ९६३५ नम्वरको बसले ठक्कर दिदा पदैल यात्री वलीको घटना स्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले बताएको छ । प्रत्यक्ष दर्शीका अनुसार बसले ठक्कर दिएर लडेका वलीलाई ब्याक गरेर बसले किचेको बताईएको छ । ठक्कर दिने बस र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । यो खवर तयार पार्दा सम्म दुवै पक्षलाई बोलाएर सहमतिको प्रयास भईरहेको प्रहरीले बताएको छ ।